မန်တလေးမှပိုးတှသေူ့တဈဦးသညျ ကားကုမ်မဏီ ဝနျထမျးဖွဈကာ နမေကောငျးလို့ မန်တလေးဆေးရုံကွီးမှာ သှားပွတာကနေ ပိုးတှသေူ့ဖွဈနေ
Posted by mmaedkza on September 20, 20200Comments
မန်တလေးမွို့တှငျ နခေ့ငျးကွောငျတောငျ အမြိုးသမီးနှဈဦး ဆှဲကွိုးဖွတျလုယကျခံရ
ကနျဒျေါလာသနျး ၉၀၀ ကုနျကမြညျ့ ၄ လမျးသှား ရနျကုနျ မိုးပြံလမျး ပျေါထှနျးလာတော့မညျ
ဘာသာရေးအကွောငျးပွမဲဆှယျသညျ့ ပွညျခိုငျဖွိုးအမတျ ဦးမောငျမွငျ့ကို ရှေးကျောထံတိုငျကွားမညျ လိုအပျပါကရဲစခနျးတှငျအမှုဖှငျ့တိုငျကွားမညျ
မဟာအောငျမွနှေငျ့ ပွညျကွီးတံခှနျ မွို့နယျတှငျ ပိုးတှလေူ့နာ နှဈဦးစီတိုးပွီး မန်တလေးတှငျ ည၊မနကျ ပိုးတှလေူ့နာ ခုနှဈဦး တိုး၊
PHL (မန်တလေး) တှငျ ဓာတျခှဲစဈဆေးမှုမှ ပိုးတှသေူ့ (၁၁)ဦး ရှိပွီး တဈနိုငျငံလုံးတှငျ (၆၄၀)ကြျောတိုး
သူရိနျမငျး၊ ပါရမီဆနျး၊ စကျတငျဘာ-၂၀
မန်တလေးမွို့ မဟာအောငျမွမွေို့နယျနေ အမြိုးသမီးနှဈဦးနှငျ့ ပွညျကွီးတံခှနျမွို့နယျနေ အမြိုးသမီး နှဈဦးတှငျ COVID-19 ရောဂါပိုး စဈဆေးတှရှေိ့ပွီး စကျတငျဘာ(၁၉)ရကျညပိုငျးနှငျ့ ယနေ့ စကျတငျဘာ(၂၀)ရကျ နံနကျပိုငျး ထုတျပွနျခကျြမြားအရ မန်တလေးတှငျ ပိုးတှလေူ့နာသဈ ခုနှဈဦးတိုးကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။
ပိုးတှလေူ့နာမြားနှငျ့ ထိတှဆေ့ကျစပျမှု ရှိခဲ့သဖွငျ့ ကှာရနျတငျးဝငျနသေူမြား ဖွဈသော မဟာအောငျမွမွေို့နယျ မဟာမွိုငျ အပိုငျး(၁)နေ အသကျ(၄၀)ကြျောအရှယျ အမြိုးသမီးတဈသီးနှငျ့ မဟာအောငျမွမွေို့နယျ ဒဝေနျးအရှရေ့ပျနေ
အသကျ(၂၀)ကြျောအရှယျ အမြိုးသမီးတို့တှငျ COVID-19 ပိုးတှခွေ့ငျး ဖွဈသညျဟု မဟာအောငျမွမွေို့နယျ အုပျခြုပျရေးမှူးက Mandalay In-depth News အား အတညျပွုသညျ။
“တဈယောကျက အလှကုနျ အဆကျ။ ကှာရနျတငျး ဝငျနတော Second Test (ဒုတိယအကွိမျစဈ) မှာ Positive (ပိုးရှိ) တှတေ့ာပေါ့။ တဈယောကျကတော့ အရာတျော Case အဆကျ။ အဲ့တာလညျး ကှာရနျတငျး ဝငျနရေငျးနဲ့ စဈတော့ ပိုးတှတေ့ာ”ဟု မွို့နယျ အုပျခြုပျရေးမှူးက ပွောသညျ။
ထို့အပွငျ ပွညျကွီးတံခှနျမွို့နယျ တမာတနျးရပျနေ အသကျ(၂၀)ကြျောနှငျ့ (၃၀)အရှယျ အမြိုးသမီး နှဈသီးတှငျလညျး COVID-19 ရောဂါပိုး တှရှေိ့ကွောငျး ယငျးမွို့နယျ COVID-19 ထိနျးခြုပျရေးနှငျ့ အရေးပျေါတုနျ့ပွနျရေး ကျောမတီမှ သတငျးရရှိသညျ။
“တဈယောကျက ဇီးပငျကွီးမှာ ကှာရနျတငျး ပို့ထားတာ၊ စဈတော့ ပိုးတှတေ့ာ။ နောကျတဈယောကျကတော့ ကားကုမ်မဏီ ဝနျထမျး။ သူက နမေကောငျးလို့ မန်တလေးဆေးရုံကွီးမှာ သှားပွတာကနေ ပိုးတှတေ့ာပေါ့”ဟု ပွညျကွီးတံခှနျမွို့နယျ အထှထှေအေုပျခြုပျရေး ဦးစီးဌာန တာဝနျရှိသူက Mandalay In-depth News အား ပွောသညျ။
အဆိုပါ ပွညျကွီးတံခှနျမွို့နယျမှ ပိုးတှလေူ့နာသဈ နှဈဦးအနကျ ကားကုမ်ပဏီဝနျထမျးသညျ ယခငျနကေ့ ပိုးတှလေူ့နာ အမြိုးသမီးနှငျ့ ဝနျးတဈဝနျးအတှငျး အတူနသေျောလညျး ခငျမငျမှုမရှိ၊ စကားပွောဆို ဆကျဆံဖူးခွငျး မရှိဘဲ
နမေကောငျးသဖွငျ့ ဆေးစဈရာမှ ပိုးတှခွေ့ငျး ဖွဈသညျဟု အထကျပါ တာဝနျရှိသူက ရှငျးပွသညျ။
လကျရှိတှငျ ၎င်းငျးတို့နှငျ့ ထိတှဆေ့ကျစပျသူမြားကို ကှာရနျတငျး စငျတာမြားသို့ ပို့ဆောငျပေးထားသညျဟု ဆိုသညျ။
မန်တလေးခရိုငျတှငျ စကျတငျဘာ(၁၉)ရကျ ညပိုငျးက ပိုးတှလေူ့နာသဈ သုံးဦး တှရှေိ့ခဲ့ပွီး ယနေ့ စကျတငျဘာ(၂၀)ရကျ နံနကျပိုငျး ထုတျပွနျခကျြတှငျလညျး ပိုးတှလေူ့နာသဈ လေးဦး တှရှေိ့သဖွငျ့ တဈနတေ့ာအတှငျး ပိုးတှလေူ့နာသဈ ခုနှဈဦး တိုးခွငျး ဖွဈသညျ။
စကျတငျဘာ(၁၉)ရကျ ညပိုငျးထုတျပွနျခကျြအရ ပုသိမျကွီးမွို့ မွို့မရပျကှကျ အောငျသိန်ဓိရပျတှငျ နထေိုငျပွီး မန်တလေးမွို့ရှိ ဟိုတယျကွီးတဈလုံးတှငျ ဝနျထမျးအဖွဈ လုပျကိုငျနသေော အသကျ(၄၀)ကြျောအရှယျ အမြိုးသားနှငျ့
၎င်းငျး၏ ဇနီး အသကျ(၃၀)ကြျောအရှယျ အမြိုးသမီးတို့တှငျ COVID-19 ရောဂါပိုး တှရှေိ့ခဲ့ကွောငျး ယငျးမွို့နယျ COVID-19 ထိနျးခြုပျရေးနှငျ့ အရေးပျေါတုနျ့ပွနျရေး ကျောမတီဝငျမြားက ပွောသညျ။
ထို့အပွငျ ခမျြးအေးသာစံမွို့နယျ လမျး၆၀နှငျ့ ၂၈လမျးအနီးတှငျ နထေိုငျပွီး ကားအရောငျးပွခနျးတှငျ လုပျကိုငျသူ အသကျ(၂၅)နှဈအရှယျ အမြိုးသမီးတှငျလညျး COVID-19 ရောဂါပိုး စဈဆေးတှရှေိ့ခဲ့ကွောငျး ခမျြးအေးသာစံမွို့နယျ COVID-19 ထိနျးခြုပျရေးနှငျ့ အရေးပျေါတုနျ့ပွနျရေး ကျောမတီမှ သတငျးရရှိသညျ။
ပွညျသူ့ကနျြးမာရေး ဓါတျခှဲမှုဆိုငျရာဌာန(မန်တလေး) (PHL-Mdy)တှငျ စကျတငျဘာ(၁၉)ရကျအတှငျး COVID-19 ဓါတျခှဲနမူနာ စဈဆေးမှုအဖွဈ ပထမအသုတျ ဓာတျခှဲနမူနာ (၅၂၁)ခုနှငျ့ ဒုတိယအသုတျ ဓာတျခှဲနမူနာ (၃၉၈)ခု၊ စုစုပေါငျး (၉၁၉)ခု စဈဆေးခဲ့ရာ (၁၁)ဦးတှငျ COVID-19 ရောဂါပိုး တှရှေိ့သညျဟု ယငျးဌာနက သတငျးထုတျပွနျသညျ။
အဆိုပါ (၁၁)ဦးတှငျ မန်တလေးခရိုငျအတှငျးမှ အထကျဖျောပွပါ ခုနှဈဦးနှငျ့ မွငျးခွံမှ ပိုးတှလေူ့နာသဈ နှဈဦး၊ စုစုပေါငျး မန်တလေးတိုငျးအတှငျးမှ ကိုးဦးပါဝငျကွောငျး Mandalay In-depth News က ကနဦး သတငျးရရှိသညျ။ ကနျြပိုးတှလေူ့နာ နှဈဦးနှငျ့ပတျသကျ၍ အခကျြအလကျမြား မရရှိသေးပါ။
ပွညျသူ့ကနျြးမာရေး ဓာတျခှဲမှုဆိုငျရာဌာန (မန်တလေး)သညျ မန်တလေးတိုငျးအတှငျးမှ ဓာတျခှဲနမူနာမြားသာမက စဈကိုငျးတိုငျးမှ ဓာတျခှဲနမူနာမြားကိုလညျး စဈဆေးလြှကျရှိသညျ။
ယနေ့ စကျတငျဘာ(၂၀)ရကျအထိ မန်တလေးတိုငျးအတှငျး COVID-19 အတညျပွုလူနာ (၁၅၀)ဝနျးကငျြ ရှိလာပွီး မွငျးခွံမွို့နယျသညျ ပိုးတှလေူ့နာ (၆၀)ဝနျးကငျြဖွငျ့ အမြားဆုံးဖွဈကာ အမရပူရသညျ ဒုတိယ အမြားဆုံးအဖွဈ ပိုးတှလေူ့နာ (၂၀)ကြျော ရှိနသေညျ။
တဈနိုငျငံလုံး အတိုငျးအတာ အနဖွေငျ့မူ စကျတငျဘာ(၁၉)ရကျအတှငျး ဓာတျခှဲနမူနာ (၅,၂၉၈) ခု စဈဆေးခဲ့ရာ COVID-19 ရောဂါ ဓာတျခှဲအတညျပွု လူနာသဈ (၆၄၂) ဦး တှရှေိ့ကွောငျး ကနျြးမာရေးနှငျ့ အားကစားဝနျကွီးဌာနက သတငျးထုတျပွနျသညျ။
ထို့အတှကျ ယနေ့ စကျတငျဘာ(၂၀)ရကျ နံနကျပိုငျးအထိ မွနျမာနိုငျငံတှငျး COVID-19 ရောဂါ ဓာတျခှဲအတညျပွုလူနာ (၅,၂၆၃)ဦး ရှိပွီး ၎င်းငျးတို့အနကျ ရောဂါသကျသာပြောကျကငျးသူ (၁၁၈၈)ဦးကို ဆေးရုံမှ ဆငျးခှငျ့ပွုခဲ့ပွီး ဖွဈကာ သဆေုံးသူ (၈၁)ဦးရှိကွောငျး ဝနျကွီးဌာနက ထုတျပွနျထားသညျ။
မန္တလေးမှပိုးတွေ့သူတစ်ဦးသည် ကားကုမ္မဏီ ဝန်ထမ်းဖြစ်ကာ နေမကောင်းလို့ မန္တလေးဆေးရုံကြီးမှာ သွားပြတာကနေ ပိုးတွေ့သူဖြစ်နေ
မဟာအောင်မြေနှင့် ပြည်ကြီးတံခွန် မြို့နယ်တွင် ပိုးတွေ့လူနာ နှစ်ဦးစီတိုးပြီး မန္တလေးတွင် ည၊မနက် ပိုးတွေ့လူနာ ခုနှစ်ဦး တိုး၊
PHL (မန္တလေး) တွင် ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုမှ ပိုးတွေ့သူ (၁၁)ဦး ရှိပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် (၆၄၀)ကျော်တိုး
သူရိန်မင်း၊ ပါရမီဆန်း၊ စက်တင်ဘာ-၂၀
မန္တလေးမြို့ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်နေ အမျိုးသမီးနှစ်ဦးနှင့် ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်နေ အမျိုးသမီး နှစ်ဦးတွင် COVID-19 ရောဂါပိုး စစ်ဆေးတွေ့ရှိပြီး စက်တင်ဘာ(၁၉)ရက်ညပိုင်းနှင့် ယနေ့ စက်တင်ဘာ(၂၀)ရက် နံနက်ပိုင်း ထုတ်ပြန်ချက်များအရ မန္တလေးတွင် ပိုးတွေ့လူနာသစ် ခုနှစ်ဦးတိုးကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ပိုးတွေ့လူနာများနှင့် ထိတွေ့ဆက်စပ်မှု ရှိခဲ့သဖြင့် ကွာရန်တင်းဝင်နေသူများ ဖြစ်သော မဟာအောင်မြေမြို့နယ် မဟာမြိုင် အပိုင်း(၁)နေ အသက်(၄၀)ကျော်အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်သီးနှင့် မဟာအောင်မြေမြို့နယ် ဒေဝန်းအရှေ့ရပ်နေ
အသက်(၂၀)ကျော်အရွယ် အမျိုးသမီးတို့တွင် COVID-19 ပိုးတွေ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု မဟာအောင်မြေမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက Mandalay In-depth News အား အတည်ပြုသည်။
“တစ်ယောက်က အလှကုန် အဆက်။ ကွာရန်တင်း ဝင်နေတာ Second Test (ဒုတိယအကြိမ်စစ်) မှာ Positive (ပိုးရှိ) တွေ့တာပေါ့။ တစ်ယောက်ကတော့ အရာတော် Case အဆက်။ အဲ့တာလည်း ကွာရန်တင်း ဝင်နေရင်းနဲ့ စစ်တော့ ပိုးတွေ့တာ”ဟု မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ပြောသည်။
ထို့အပြင် ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် တမာတန်းရပ်နေ အသက်(၂၀)ကျော်နှင့် (၃၀)အရွယ် အမျိုးသမီး နှစ်သီးတွင်လည်း COVID-19 ရောဂါပိုး တွေ့ရှိကြောင်း ယင်းမြို့နယ် COVID-19 ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် အရေးပေါ်တုန့်ပြန်ရေး ကော်မတီမှ သတင်းရရှိသည်။
“တစ်ယောက်က ဇီးပင်ကြီးမှာ ကွာရန်တင်း ပို့ထားတာ၊ စစ်တော့ ပိုးတွေ့တာ။ နောက်တစ်ယောက်ကတော့ ကားကုမ္မဏီ ဝန်ထမ်း။ သူက နေမကောင်းလို့ မန္တလေးဆေးရုံကြီးမှာ သွားပြတာကနေ ပိုးတွေ့တာပေါ့”ဟု ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန တာဝန်ရှိသူက Mandalay In-depth News အား ပြောသည်။
အဆိုပါ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်မှ ပိုးတွေ့လူနာသစ် နှစ်ဦးအနက် ကားကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းသည် ယခင်နေ့က ပိုးတွေ့လူနာ အမျိုးသမီးနှင့် ဝန်းတစ်ဝန်းအတွင်း အတူနေသော်လည်း ခင်မင်မှုမရှိ၊ စကားပြောဆို ဆက်ဆံဖူးခြင်း မရှိဘဲ
နေမကောင်းသဖြင့် ဆေးစစ်ရာမှ ပိုးတွေ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု အထက်ပါ တာဝန်ရှိသူက ရှင်းပြသည်။
လက်ရှိတွင် ၎င်းတို့နှင့် ထိတွေ့ဆက်စပ်သူများကို ကွာရန်တင်း စင်တာများသို့ ပို့ဆောင်ပေးထားသည်ဟု ဆိုသည်။
မန္တလေးခရိုင်တွင် စက်တင်ဘာ(၁၉)ရက် ညပိုင်းက ပိုးတွေ့လူနာသစ် သုံးဦး တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ယနေ့ စက်တင်ဘာ(၂၀)ရက် နံနက်ပိုင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင်လည်း ပိုးတွေ့လူနာသစ် လေးဦး တွေ့ရှိသဖြင့် တစ်နေ့တာအတွင်း ပိုးတွေ့လူနာသစ် ခုနှစ်ဦး တိုးခြင်း ဖြစ်သည်။
စက်တင်ဘာ(၁၉)ရက် ညပိုင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ ပုသိမ်ကြီးမြို့ မြို့မရပ်ကွက် အောင်သိန္ဓိရပ်တွင် နေထိုင်ပြီး မန္တလေးမြို့ရှိ ဟိုတယ်ကြီးတစ်လုံးတွင် ဝန်ထမ်းအဖြစ် လုပ်ကိုင်နေသော အသက်(၄၀)ကျော်အရွယ် အမျိုးသားနှင့်
၎င်း၏ ဇနီး အသက်(၃၀)ကျော်အရွယ် အမျိုးသမီးတို့တွင် COVID-19 ရောဂါပိုး တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ယင်းမြို့နယ် COVID-19 ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် အရေးပေါ်တုန့်ပြန်ရေး ကော်မတီဝင်များက ပြောသည်။
ထို့အပြင် ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် လမ်း၆၀နှင့် ၂၈လမ်းအနီးတွင် နေထိုင်ပြီး ကားအရောင်းပြခန်းတွင် လုပ်ကိုင်သူ အသက်(၂၅)နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးတွင်လည်း COVID-19 ရောဂါပိုး စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် COVID-19 ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် အရေးပေါ်တုန့်ပြန်ရေး ကော်မတီမှ သတင်းရရှိသည်။
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဓါတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန(မန္တလေး) (PHL-Mdy)တွင် စက်တင်ဘာ(၁၉)ရက်အတွင်း COVID-19 ဓါတ်ခွဲနမူနာ စစ်ဆေးမှုအဖြစ် ပထမအသုတ် ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၅၂၁)ခုနှင့် ဒုတိယအသုတ် ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၃၉၈)ခု၊ စုစုပေါင်း (၉၁၉)ခု စစ်ဆေးခဲ့ရာ (၁၁)ဦးတွင် COVID-19 ရောဂါပိုး တွေ့ရှိသည်ဟု ယင်းဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
အဆိုပါ (၁၁)ဦးတွင် မန္တလေးခရိုင်အတွင်းမှ အထက်ဖော်ပြပါ ခုနှစ်ဦးနှင့် မြင်းခြံမှ ပိုးတွေ့လူနာသစ် နှစ်ဦး၊ စုစုပေါင်း မန္တလေးတိုင်းအတွင်းမှ ကိုးဦးပါဝင်ကြောင်း Mandalay In-depth News က ကနဦး သတင်းရရှိသည်။ ကျန်ပိုးတွေ့လူနာ နှစ်ဦးနှင့်ပတ်သက်၍ အချက်အလက်များ မရရှိသေးပါ။
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (မန္တလေး)သည် မန္တလေးတိုင်းအတွင်းမှ ဓာတ်ခွဲနမူနာများသာမက စစ်ကိုင်းတိုင်းမှ ဓာတ်ခွဲနမူနာများကိုလည်း စစ်ဆေးလျှက်ရှိသည်။
ယနေ့ စက်တင်ဘာ(၂၀)ရက်အထိ မန္တလေးတိုင်းအတွင်း COVID-19 အတည်ပြုလူနာ (၁၅၀)ဝန်းကျင် ရှိလာပြီး မြင်းခြံမြို့နယ်သည် ပိုးတွေ့လူနာ (၆၀)ဝန်းကျင်ဖြင့် အများဆုံးဖြစ်ကာ အမရပူရသည် ဒုတိယ အများဆုံးအဖြစ် ပိုးတွေ့လူနာ (၂၀)ကျော် ရှိနေသည်။
တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာ အနေဖြင့်မူ စက်တင်ဘာ(၁၉)ရက်အတွင်း ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၅,၂၉၈) ခု စစ်ဆေးခဲ့ရာ COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာသစ် (၆၄၂) ဦး တွေ့ရှိကြောင်း ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
ထို့အတွက် ယနေ့ စက်တင်ဘာ(၂၀)ရက် နံနက်ပိုင်းအထိ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ (၅,၂၆၃)ဦး ရှိပြီး ၎င်းတို့အနက် ရောဂါသက်သာပျောက်ကင်းသူ (၁၁၈၈)ဦးကို ဆေးရုံမှ ဆင်းခွင့်ပြုခဲ့ပြီး ဖြစ်ကာ သေဆုံးသူ (၈၁)ဦးရှိကြောင်း ဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားသည်။
Chitsakar is your news, entertainment, music fashion website. We provide you with the latest breaking news and videos straight from the entertainment industry.
© 2020 Chitsakar